Vao Teraka Ny Wikipedia Tulu, Fantaro ilay Faha-23 Amin’ireo Fiteny Avy Ao Azia Atsimo! · Global Voices teny Malagasy
Vao Teraka Ny Wikipedia Tulu, Fantaro ilay Faha-23 Amin'ireo Fiteny Avy Ao Azia Atsimo!
Voadika ny 29 Aogositra 2016 3:16 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Español, English, Esperanto , Ελληνικά, English
Ny endri-tsoratra Tigalari. Sary avy ao amin'ny Wikimedia Commons natolotr'i ಶ್ರೀ. CC BY-SA 3.0
Ny Wikipedia amin'ny fiteny Tulu no farany indrindra amin'ny fianakaviamben'ireo fiteny 294 manerantany ao amin'ny tetikasa Wikipedia taorian'ny nijoroan'ilay tetikasa avy amin'ny Wikimedia Incubator tany ampiandohan'ity volana ity.
Niandry teo amin'ny valo taona teo tao anatin'ilay Incubator ny tetikasa talohan'ny nahalasa azy ho ny faha-23 amin'ireo fiteny Aziatika Tatsimo ao amin'ny Wikipedia. Afaka hita ao amin'ny https://tcy.wikipedia.org, manana lahatsoratra miisa 1.285 ny habaka Tulu, nosoratanà mpanoratra 198, eo amin'ny 5-10 amin'ireo no mavitrika mamoaka dimy mahery isambolana.
Nandritry ny WikiConference India ny fanambaràna momba ny fahaterahan'ilay tetikasa no nataon'i Katherine Maher, Tale Mpanatanteraky ny “Wikimedia Foundation”.
Tetikasa rahavavin'ny Wikimedia ny Wikipedia Incubator ary talohan'ny nisian'ny teny vaovao napetraka tao amin'ny Wikipedia, natsangana ny tetikasa Incubator iray, nampiroboroboin'ireo mpanoratra nirotsaka an-tsitrapo. Vao nahazo vàhana bebe kokoa ilay tetikasa niaraka amin'ireo mpamoaka lahatsoratra nitrandraka votoaty nisinisy kokoa sy matetika, dia nivadika ho tetikasa Wikipedia ilay tetikasa avy eo.
Telo ka hatramin'ny dimy tapitrisa no miteny ny fiteny Tulu any amin'ireo fanjakana Indiana ao Karnataka sy Kerala, ary misy maro ireo zanaka am-pielezana monina any Etazonia sy ireo firenen'ny Golfa.
Valo taona tany aloha, tamin'ny 2008, azo nisaina tamin'ny rantsan-tànana ireo mpamoaka lahatsoratra nanangana ny Wikipedia Tulu. Saingy ankoatr'ireo fanovàna vitsivitsy nitsitaitaika matitetika, kely ihany ny tosika mba hitondràna ilay tetikasa hiroso kokoa.
Amin'ny tena heviny, ny vondrom-piarahamonina iray dia izay manome sehatra ny fifampiresahana, ny marimaritra iraisana ary ny fiarahana miasa. Tsy nisy velively izany ho an'ny Wikipedia Tulu satria samy niasa nitoka-monina tsy nisy fifandraisana tany daholo ireo mpamoaka lahatsoratra.
Nisy avy eo ny filàn'izy ireo mihaona sy hametraka tetikady iray hampijoro ilay vondrom-piarahamonina sy ilay Incubator, tamin'ny fisarihana mpandray anjara mavitrika kokoa.
Tamin'ny 2014, noresahana ny filàna mampifandray ireo mpamoaka lahatsoratry ny Wikimedia Tulu sy fifandrimbonana amin'ny fametrahana vondrona tonian-dahatsoratra, ka dia tao Mangalore ny fihaonana iray nokarakarain'ny fandaharanasa Centre for Internet and Society—Access to Knowledge (CIS-A2K) ( Foibe ho an'ny Aterineto sy ny Fiarahamonina, Fidirana ho amin'ny Fahalalàna) fandaharanasa iray mpanentana noforonin'ny Wikimedia Foundation mba hanohanana sy hampitomboana ireo fiteny Indiana ao amin'ny Wikipedia sy ireo tetikasa Wikipedia any amin'ny sobakaontinanta Indiana.
Toy ny vokatr'izany fihaonana izany, nanomboka nisy fihaonana vondrom-piarahamonina bebe kokoa nitranga. Nisy atrikasa vitsivitsy notontosaina tao Mangalore mba ho tolo-tànana fanofànana ireo mpandray anjara, ary nanokatra ny varavarany ny Kolejy St. Aloysius tao an-tanàna mba hampidirana ny famoahana lahatsoratra ao amin'ny Wikipedia ho ampahany amin'ny fandaharam-pianarany.
Nisy avy hatrany ny fikarakaràna fandaharanasa Fampianarana Wikipedia ho an'ireo mpianatry ny ambaratonga voalohany tao amin'io kolejy io, izay nanomboka ny famoahana lahatsoratra amin'ny Wikipedia ho toy ny lakilasy tsy maintsy atrehana, ary mandray anjara amin'ny fanaovana tombana ireo lahatsoratra ilay toeram-pianarana.
Vishwanatha Badikana, profesora mpanampy ao amin'ny departemanta Kannada ho an'ny teny ao amin'ny Kolejy St. Aloysius, no lasa toniandahatsoratra mavitriky ny Wikipedia Tulu sy mitarika ireo asa fanentanana ao amin'ilay toerana fanabeazana. Nampanan-karena ny Wikipedia Tulu tamin'ny alàlan'ireo lahatsoratra manana lohahevitra midadasika sy maro karazana ireo mpianany.
Ny pejy fandraisana ao amin'ny Wikipedia Tulu. Sary tao amin'ny Wikimedia Commons
Na izany aza, vao ny ampahany kely amin'izay tokony hatao ihany no vita hatreto. Mbola somary bitika ilay vondrom-piarahamonina ary tsy maintsy mitombo miaraka amin'ny hany fanohanana azony avy amin'ilay toeram-pianarana tokana. Ny vondrom-piarahamonin'ny fiteny Tulu koa dia tsy maintsy mivolon-ko tompony sy mirotsaka ho mpitantana ny fitomboan'ny Wikipedia Tulu.
Na eo aza ny fahalavàny, ny harena ara-pitenenana ananany, mbola mitolona mafy ny Tulu raha resaka fanatratrarana ny hampiasàna misimisy kokoa azy amin'ny fanoratana, indrindra fa amin'ny endri-tsoratra niandohana. Somary hita mibaribary ihany koa ny tsy fahampian'ny fampahafantarana satria ny Karnataka Tulu Sahitya Academy, rantsana ofisialy napetrakly ny governemanta Karnataka dia mampiasa ny Kannada sy ny teny Anglisy ho teny ofisialy ao amin'ny vavahadin-tseraserany.
Ny fanamby goavana indrindra amin'izany rehetra izany dia ny tsy fisian'ny tohana Unicode. Ny Unicode dia fenitra iraisampirenena ho an'ny endri-tsoratra, ary ny endri-tsoratra Tigalari izay ampiasaina hanoratana ny Tulu dia tsy tafiditra ho isan'ny ao anatin'ny Unicode. Amin'izao fotoana izao aloha, ireo lahatsoratra rehetra ao amin'ny Wikipedia Tulu dia voasoratra amin'ny endri-tsoratra Kannada avokoa satria ny ankamaroan'ireo mpiteny azy dia any amin'ny fanjakan'i Karnataka no monina, ary mampiasa ny Kannada ho toy ny fiteniny faharoa.
Ny hany mety hahafahana mampiasa ny endri-tsoratra Tigaliri dia mifamatotra amin'ny fampanarahana fenitra ilay endri-tsoratra amin'ny Unicode, amin'ny fanatontosana endri-tsoratra mampiasa lisansa maimaimpoana mba ho azo atolotra ho toy ny endri-tsoratra fampiasa amin'ny tranonkala izy, hamoahana azy raha sendra misy amin'ireo mpampiasa finday no tsy manana ilay endri-tsoratra voapetraka mialoha ao anatin'ny fitaovan'izy ireo. Farany dia tsy maintsy avadika avy amin'ny Kannada ho lasa Tigaliri ny endri-tsoratra ho an'ireo votoaty efa misy.
Misy andianà lahatsary valo fampianarana ny momba izay tokony atao, noforonina mba hanampy ireo mpamoaka lahatsoratra efa amperinasa sy ny vaovao mba hahafantatra bebe kokoa momba ny politika sy ny torolalan'ny Wikipedia, ny endriky ny fanoratana ary ny dingana famoahana lahatsoratra.
“Marobe ireo mpianatra nandray anjara tamin'ny famoronana ireny fampianarana ireny,” hoy ny Dr. Badikana.
Manao izay tratry ny ainy ireo andianà mpamoaka lahatsoratra efa misy amin'izao fotona izao, mba hanely ny feo momba ilay tetikasa, no sady miezaka mitahiry ny fototry ny soatoavin'ny Wikipedia.
Tao anaty tafa iray ho an'ny vavahadin-tseraseran'ny media Daijiworld, Bharathesha Alasandemajalu, mpamoaka lahatsoratra mavitrika monina ao Oman, nilaza hoe: “na iza na iza afaka manoratra na mamoaka lahatsoratra ao amin'ny Wikipedia Tulu avokoa, saingy tsy tokony ho hàla-tàhaka ilay izy [..] Tokony ho fanànan'ny tena ireo sary, na nakarina miaraka amin'ny fanomezandàlan'ny tompony. Hanampy ireo taranaka any aoriana izany mba hahafantatra misimisy kokoa momba ilay teny sy hiasa ho toy ny loharano fanovozana fahalalàna momba ny fiteny sy ny kolontsaina Tulu.”
Fanampin'ireo dia nozarain'i Dr. Badikana ihany koa tao anaty tafa iray niarahany tamin'ity mpanoratra ity fa feno fanantenana izy ny hahita mpiteny Tulu bebe kokoa handray anjara ao amin'ny Wikipedia Tulu, satria hitany fa fomba iray tena mahomby ho fiarovana ilay fiteny ny fampitomboana ny votoaty amin'ilay fiteny ao anaty aterineto sy ny asa ampiarahana amin'ny asa mahazatra any an-dakilasy.
Subhashish Panigrahi dia manampahefana ao amin'ny “Centre for Internet and Society's Access to Knowledge program (CIS-A2K)”. Niaraka niasa akaiky tamin'ny vondrom-piarahamonina Wikipedia Tulu ny CIS-A2K mba hanome aina ity tetikasa ity.
14 ora izayIndia